(Josoa 24 :19-28, Matio 16 :13-19, I Kor 2 :1-5)
Ry havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe “ Fototry ny finoantsika ny Tompo” isika mandritra ity volana ity. Ireo perikopa telo voalahatra tamintsika tamin’ity anio ity, dia samy mampihanjahanja ny faneken’ny vahoakan’Andriamanitra ny hanorina ny finoany Aminy irery ihany.
1 FANTARO TSARA IZAY TOMPOINAO (Matio 16:13-19)
Fanontaniana no nataon’I Jesoa tamin’ireto mpianany ny amin’ny momba Azy. Moa ve mba tena fantatr’ireo mpianany marina tokoa ve ity tompoiny sy arahiny? I Petera no namaly Azy teto ka nano hoe: “IANAO NO KRISTY ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA” ( Mat 16:16). Fantatr’I Petera tsara fa Izy no ilay Kristy, fantany fa Zanak’Andrimanitra I Jesoa. Fanekem-pinoana mihitsy no nataon’I Petera teto.
Ho anao ko, moa ve tena fantatrao marina tokoa ity Tomponao? Sao mantsy manafangaro tompo hafa ianao. Sao dia mivavaka ny olona dia mba mivavaka koa ianao. Sao dia miditra am-piangonana ny olona , dia mba miditra koa ianao, nefa tsy fantatrao akory izay tompoinao.
Mety milaza fa tena mahafantatra Azy tokoa ianao. Inona ary no tokony ho ataonao raha fantatrao ny Tomponao?
2 ANKATOAVY IZY (Jos 24:19-28)
Tsy vitany hoe mahafantatra fostiny ianao, fa rehefa fantatrao marina tokoa ny Tompo dia mitaky fankatoavana izany. Amin’ity Josoa ity dia tao anatin’ny vanim-potoana faramparany nitondran’I Josoa ny Zanak’Israely teto. Nanafatrafatra ary nampisafidy ny Zanak’Israely amin’izay andriamanitra ho tompoiny izy (Jos 24:19). Kanefa ny zanak’Israely dia nisafidy an’I Jehovah ho Andriamaniny sy hotompoiny. Izany indrindra no nilazan’I Josoa tamin’ireto vahoak’Israely ireto nanao hoe :”TSY MAHAY MANOMPO AN’I JEHOVAH IANAREO; FA ANDRIAMANITRA MASINA IZY KA TSY HAMELA NY FAHADISOANAREO SY NY FAHOTANAREO.” (Jos 24:19). Toa efa fantapantratr’I Josoa fa mora tamin’ny Israely ny manaiky ary mora aminy koa ny mivadika amin’ny fanekena efa nataony. Nambarany tamin’ireto vahoakan’Israely ireto tsara fa “masina” ity Andriamanitra izay nosafidiany ity, ka tsy azo vazivaziana na lalaovina. Nanaiky ny Zanak’Isarely fa hanompo an’I Jehovah irery ihany sy hihaino ny feony irery ihany koa ( Jos 24:24). Milaza izany fa vonona ny hankato an’Andriamanitra izy ireo.
Ho antsika koa ankehitriny, raha fantatrao fa Andriamanitra masina ity Andrimanitra izay ivavahanao ity, dia ankatoavy izay lazainy aminao. Mihainoa ny feony irery ihany, tanteraho izay ambarany.
Ary rehefa mankato izay lazainy isika, dia izao no tokony hataontsika:
3 TORIO AMIN’NY OLONA REHETRA IZY (I KOR 2/1-5)
Rehefa nananatra ny fiangonana tao Korinto I Paoly tamin’ny fifampiandaniana nisy tao ( I Kor 1:10ss) dia nanomboka nilaza ny amin’ny fitoriana ny filazantsara rehetra nataony. Ary izany no voalaza manomboka eto amin’ity took faha 2 ity. Nilaza I Paoly eo amin’ny andininy voalohany eo, fa fitoriana filazantsara no nataony tamin’izy ireo. Ary I Jesoa Kristy maty teo ambonin’ny hazo fijaliana ( I Kor 2:2) no nambarany tamin’ireo vahoaka tao Korinto. Nahataona olona izy tamin’izany noho ny herin’Andriamanitra. Ilaina, ry havana, ny handehananao koa mitory ny filazantsara, manammbara ny amin’Andriamanitra izay ivavahanao. Raha tsy hitory ianao, ry havana, dia olona hafa no history sy hanambara ny azy nefa tsy hahazoana famonjena mandrakizay akory izany. Koa maniraka anao anio ny Tompo! Mandehana! Torio Jesoa sy ny famonjeny!
Ry Havana, “fototry ny finoantsika ny Tompo”: moa ve fantatrao izay tompoinao? Fantatrao tsara Iza marina ity Andriamanitra izay tompoinao sy anorenano ny finoanao ity? Ary raha fantatrao tsara izay Andriamanitra ivavahanao, dia ankatoavy izay lazainy ary ndeha torio sy ambarao any amin’ny hafa ny voninahiny sy ny heriny ary ny fitiavany.